दुष्ट छिमेकीका कारण खुट्टो सुन्नियो सरकार | शहरबाट शब्दहरु
« ‘जे सक्छौं गर, म हार्दिन’
जन्मदिनको टाइममा ग्यासको टन्टा »
दुष्ट छिमेकीका कारण खुट्टो सुन्नियो सरकार	असोज ३०, शनिबार । भनिन्छ छिमेकी आपत पर्दा र सापत पर्दा चाहिन्छ । तर हाम्रो एक छिमेकीले मनै दुख्नेगरि असहयोगी बन्दै गएको छ । मुखमा रामराम बगलीमा छुरा जस्तै झनझनै पीडामाथि पीडा थपिरहेका छन् । उही हो छिमेकी जसले देशलाई धानेको थियो । उही छिमेकी जसले देशको हरेक आन्तरिक विषयमा बोल्यो र एकाधिकार बनाउने प्रयत्न गर्दै आइरहेको छ । उही भारत हो जसले देशको सिमालाई मिच्यो । ठूला खोलालाई खायो । देशको आर्थिक क्रान्ति नारा चलिरहँदा वास्तविक फाइदा उसैले लुट्यो । आज उही कठोर भईदियो । देशलाई विचल्लीमा बनायो । अझै हामी भन्दैछौं । हामी झुक्दैनौं र हाम्रो स्वाभिमान बेच्दैनौं । सत्य हो हामी झुक्दैनौं हाम्रो आफ्नै वीरताको कथा र इतिहास छ । हो हामी हाम्रो स्वाभिमान बेच्दैनौं किनकी हामीलाई हरेक पीडा प्यारो छ । कोहीसँग हामी डराउँदैनौं । हाम्रो ईज्जत र नाम विश्वभर फैलिएको छ सगरमाथा उठेको छ । यसकारण स्वाभिमानपनि बेच्दैनौ ।
हामी झुक्दैनौं र हाम्रो स्वाभिमान बेच्दैनौं । सत्य हो हामी झुक्दैनौं हाम्रो आफ्नै वीरताको कथा र इतिहास छ । हो हामी हाम्रो स्वाभिमान बेच्दैनौं किनकी हामीलाई हरेक पीडा प्यारो छ । कोहीसँग हामी डराउँदैनौं । हाम्रो ईज्जत र नाम विश्वभर फैलिएको छ सगरमाथा उठेको छ । यसकारण स्वाभिमानपनि बेच्दैनौ ।
यता उही छिमेकीका कारण यातायात गञ्जागोल छ । घरबाट हिडेकाहरू कहिले घर पुग्छन् ? घरका परिवार चिन्तित छन् । व्यवसायीहरूमा ऋणको घाऊ बल्झिएको छ । बजारमा चिया पाक्दैनन् । खाजापनि मुश्किलले खुवाएर पसलले र केही यात्रुलाई बचाउने दौडधूपमा लागिरहेका छन् । एक साँझ म पनि यात्रु बने । मैले विगत १२ दिनदेखि देशका नागरिकले दिनहँु भोगिरहेका कथाव्यथालाई भोगेँ । अनि त्यसपछि असल छिमेकीको कथा लेख्न मनलागेको हो ।
अनुहार पुस्तकमा एउटा अभियान प्रारम्भ भएको पढेँ र खुशी लागेको थियो अभियान सुन्दा र पढ्न पाउँदा । अभियान #carpoolkathmandu । तर यो अभियान उसैको लागि हो जसले हात बढाउँछ । तर धेरैजस्तो भद्रभलादमी सडकछेऊबाट होइन बीच बाटोबाटै गाडी र बाइक कुदाउँछन् एक्लाएक्लै । कोहीकोही ट्राफिकले रोकिहाल्यो भने मात्रे यात्रुले अभियानबारे खुशी मनाउँछन् । टेम्पु, माइक्रो र बसको छतमा शहर यात्रा चलेकै छ । झुन्डिएर र छतमा सिटका सुविधासहित यात्रामा तल्लिन छन् देशका नागरिक । यति धेरै जोखिम भएपनि यात्रु गतव्य पुगिरहेका छन् । सुरक्षा संयन्त्र मुकदर्शक हुँदै दुःखित देशको दृश्य टुलुटुलु हेर्न बाध्य बनिरहेको छ । यस्तो परिस्थितीमा पनि हामी झुकेका छैनौं । प्रहरी र ट्राफिकपनि ठूला गाडीको प्रयोग गरेर देशका नागरिकलाई गतब्यसम्म पु¥याइरहेका छन् ।
हाम्रा छिमेकीको अझै आँखा बन्द छ । यसो छ छिमेकी कठोर हुनु उसैलाई पनि घाटा छ । तर ऊ पनि हामी झुक्दैनौं र नेपालको स्वाभिमान किनेरै छाड्छौं भन्ने अडानमा देखिन्छन् ।
देशका नागरिक यतिखेर देशकै नागरिकबाट ठगिँदैछन् । चाहे जोकोही होस्, ट्याक्सी चढ्नुस् । ३ सय रूपैयाँभन्दा कममा कुनै गतव्यमा पुग्दैनन् ट्याक्सी महाशय । महाशय भन्छन्, ‘के गर्नु सर, तेल व्ल्याकमा लिइयो । यहाँसम्म जान ८ सय, त्यहाँसम्म जान १ हजार ।’ यसलाई कारवाही गर्ने की ज्यान जोगाउन समयमै घर पुग्ने । अभावको पराकाष्ठा चलिरहँदा तेल व्ल्याकमा बेच्ने को ? कसले कहाँबाट व्ल्याकमा बेचेर देशका नागरिक ठग्न देशकै नागरिकको प्रयोग भएको छ ? यसको अनुसन्धान र निगरानी गर्ने को ?
ग्यासको कथापनि उस्तै । घरपरिवारले दाउरा बालेर दालभात खाइरहेका छन् । नेपालीको खाना दालभात र तरकारी । के मिठो महाराज भोक मिठो ? यसकारण जसरीपनि भोक टार्न विकल्प प्रयोग गरिरहेका छन् । ग्यासमा पनि व्ल्याकवाला नेपालीले नेपालीलाई नै ठगिरहेका छन् । एउटा सिलिण्डरको १० हजारसम्म मूल्य तोकिएको छ । लुकाईलुकाई घर पु¥याइरहेका छन् । तरपनि सत्यसत्य हामी हारेका छैनौं र झुकेका पनि छैनौं ।
This entry was posted on अक्टोबर 17, 2015 at 3:59 बिहान and is filed under मेरो लेख. You can subscribe via RSS 2.0 feed to this post's comments.	You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.